Isikhongozeli seJumbo Tube, iTanki ye-T75 ISO, i-LNG Mini Plant, i-Industrial Gas Cylinders kunye ne-Tanks-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
ISinoCleansky luphawu lwehlabathi oludumileyo lweSuper Container Supply.
Ukusuka kwisilinda segesi ukuya etankini, ukusuka koxinzelelo oluphezulu ukuya kwi-cryogenic, uSinoCleansky uhlala ethe nca kumgangatho obalaseleyo, iteknoloji ephezulu, isisombululo esitsha kunye nenkonzo ethembekileyo.
Ngobuchule kunye namava, uSinoCleansky ukhonza abathengi abavela kwihlabathi liphela njengengcali yegesi yokugcina irhasi, ukuhambisa kunye nokusetyenziswa.
Ukuwelda kunye nokusika
NGATHI SinoCleansky - Super Container Supply
Contact us，Please dial:+ 86-10-64709959
USinoCleansky uya kuthatha inxaxheba kwi-21st NOG CONFERENCE & EXHIBITION
ISinocleansky ikhuphe uHlelo lwamva nje lweeNcwadana zeMveliso
Iimveliso zohlulwe zibe ziindidi ezimbini: izixhobo zerhasi yeshishini & nezisombululo zobunjineli kunye nezixhobo zegesi yeNdalo & nezisombululo zobunjineli.
Iitanki zeShell zangaphandle zeShell zeMicrobulk zithunyelwe eUkraine
I-Carbon Steel yangaphandle Shell 3m3 16bar Microbulk Tanks Shipment
ISinocleansky ithumela ngaphandle itanki ye-microbulk ngokuqhubekayo.
Ukugcinwa kweoksijini kulwelo 210L & 500L iisilinda zeCryogenic
210L isilinda cryogenic & 500L isilinda cryogenic
Umthamo wamanzi 840l Chlorine Cylinders zithunyelwe ngo-Okthobha u-2020
I-chlorine engamanzi isetyenziselwa unyango lwamanzi.
500L iisilinda Cryogenic zithunyelwa eRashiya
I-SinoCleansky iyila uhlobo oluthe tyaba lwesilinda se-cryogenic njenge seti enye enomphunga kunye nokusetyenziselwa irhasi yeArgon.
EN ISO esemgangathweni eneSitifiketi seTped 50l -200bar iisilinda zegesi
I-SinoCleansky ithumela kwelinye ilizwe i-50L -200bar Cylinders kwi-Yurophu.
Iisilinda zeOxygen zeZonyango kunye neZinto ezithunyelwayo eMzantsi
I-SinoCleansky igcina ukuthumela ngaphandle iisilinda eMzantsi Melika, kwi-ISO9809 standard 50L 200bar.
Ilungelo lokushicilela © 2019 sinocleansky Onke amalungelo agciniwe. Ubugcisa nguMEEALL